प्रचण्डले निःशर्त आरोपपत्र फिर्ता लिएमात्र विवाद सकिन्छ: प्रमुख सल्लाहकार रिमाल « हाम्रो ईकोनोमी
अहिले देखिएको विरोध र आरोपपत्रमा अराजनीतिक आग्रह, आवेग र कुण्ठा मिसिएको छ । समस्या वा कमजोरी छन् भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ तर आवेग मिसिएको विरोधको नियत सही हुँदैन । त्यो एकताको भावनाविरुद्ध हुन जान्छ । खासगरी तत्कालीन दुई पार्टी गठबन्धनका हैसियतले गत निर्वाचनमा जाँदा आमकार्यकर्ता एकै पार्टीसरहका हिसाबले प्रचारमा खटेर लागेको भुल्नु हुँदैन । जनमतमा पनि त्यही भावना प्रकट भयो । शायद यही भावनामा टेकेर दुई अध्यक्षले एकताको आवश्यकता र औचित्यबारे आआफ्ना केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव राख्नुभयो र एकता भयो ।
यो एकता विगतमा भएका कम्युनिष्ट पार्टीका एकता वा परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको ढाँचाभन्दा पृथक किन पनि छ भने यसमा केही मौलिक विधि र विधान बनाइएका छन् । जस्तो, दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जनवादी केन्द्रीयताअन्तर्गत अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्ने आदि विषय अहिलेलाई थाँती राखिएका छन् । एकता महाधिवेशनसम्म सबै निर्णय सहमतिमा गर्ने भनिएको छ । विसं २०७५ जेठ ३ मा एकता घोषणा हुँदा दुई वर्षभित्र गरिने महाधिवेशनमा पनि सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको थियो ।
हामीले तोकिएका समयमा एकताका काम पूरा गर्न सकेनौँ र कोभिड–१९ लगायत कारण दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको महाधिवेशन आगामी चैत मसान्तमा गर्ने गरी गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्धारण गरेको छ । सोही बैठकले पार्टीभित्रका विवाद समाधान गरेर भदौ २९ मा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कमजोरी हुन सक्छन् र त्यस्ता कुराहरु भएमा समीक्षा गरौँ भन्दै आउनुभएको छ तर मन्त्रिमण्डलको हेरफेरबारे सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदा मापदण्डका आधारमा दुई अध्यक्षले परामर्शमा गर्ने भन्ने भएको हो । अध्यक्षद्वयको छलफल हुँदा पुनःगठनका केही आधारहरु, जस्तो सबै मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने, दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकालाई बिदा दिने वा आवश्यकतानुसार थपघट गर्ने भन्नेबारेमा परामर्श भएको हो ।
त्यतिबेला तीनै जना मन्त्री नियुक्तिका लागि तयारी भएर राष्ट्रपतिसमक्ष नाम गइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको हो । अन्य मन्त्रीका हकमा दशैँतिहारपछि विचार गर्न प्रधामन्त्री तयार हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा पटकपटक निर्वाचन जितेर मन्त्री नभएकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो । यो छलफलकै क्रममा छ । राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि परामर्श भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री भनेका कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ । डा युवराज अतिवडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतमा अध्यक्ष दाहालकै प्रस्ताव हो । निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाउने पनि सहमति र जानकारीमै भएकै हो ।
अर्काे देशका प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग भेट्न फलानो व्यक्तिलाई पठाइदिनू भनेर त भन्न मिल्दैन होला ! सोहीबमोजिम भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएर भेटेर जानुभयो । त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा नोट टिपाइएको छ, भेटबारे सार्वजनिक जानकारी दिइएको छ ।
फेरि पनि उहाँले मिलेर जाऔँ भन्नुभएको छ । आरोप लगाउने नेताहरुले त्यस प्रस्तावलाई मित्रताको ठाउँ राखेर ल्याउनुभएको हो वा वार कि पारको हिसाबले ल्याउनुभएको हो, पहिला त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा पार्टीको एकता र सहमतिको यात्रा तय हुन्छ । अध्यक्ष ओली पार्टी एकता र निष्ठाको पक्षधर हो । उहाँ विभाजन चाहनुहुन्न ।
विग्रहको स्थितिमा जाँदा के हुन्छ भनेर अहिले आकलन नगरौँ । मूलतः त्यो लाञ्छनापत्र अध्यक्ष दाहाल जस्तो त्यो तहको नेता आफैँले लेखेको हो वा उहाँलाई त्यस्तो लेख्न कसैले फसाएको हो, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अध्यक्ष दाहालले अब त्यागको पालो प्रधानमन्त्रीको भन्नुभएको र आफूलाई पटकपटक अपमानित गराइएको कुरा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भ के हो ? पार्टी अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिले सानो र कच्चा चित्त राखेर हुँदैन । कसको कुर्सी कता फर्कियो ? कसको रुमाल कता खस्यो भन्ने जस्ता कुराहरुको हिसाब गरेर बस्नु हुँदैन ।
अपमान र त्यागका कुरा उठ्दा मैले अघि पनि भनेँ कि हामी सहमतीय आधारमा छौँ । लोकप्रिय मतका आधारमा हिस्सेदारी वितरण गरेका छैनौँ । राष्ट्रपति एक धार र उपराष्ट्रपति अर्काे धार, सभामुख र उपसभामुख पनि दुई पक्षले मिलेर लिएको बिर्सन मिल्दैन ।